Farmaajo mowqifkiisa waa sii caddeeyey | Keydmedia
Farmaajo mowqifkiisa waa sii caddeeyey
Xildhibaanada ayaa u muuqda inay ka shaqeynayaan Mooshin mudo korarsi ah oo Farmaajo usoo dhiibay kaasoo la filayo markii uu kasoo laabto Dhuusamareeb in la meel mariyo, sidass waxaa yiri CC Shakuur.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ee mucaaradka, C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa qoraal kasoo saaray khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu maanta u jeediyay Gollaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna ku eedeeyay Farmaajo xadgudub awood qaybsigii siyaasadeed.
"Madaxweyne Farmaajo mowqifkiisa waa sii caddeeyey, safarkiisa Dhuusamarreeb na waa gacmo daalis iyo gar-naclaysi, haddii uusan Golaha Shacabka siraynin, sidii uu horay xukuumadda iyo raysalwasaaraha ugu siray in awoodda iyo talada iyagu leeyihiin." - Sidaas waxaa qoray CC Shakuur.
CC Shakuur ayaa intaas ku daray: "Farmaajo wuxuu inkiray jiritaanka Aqalkii sare, kaalintii ay wakiilka kaga ahaayeen Dowlad Goboleedyadana wuxuu siiyey Golaha Shacabka. Wuxuu sidoo kale ku xadgudbay awood qaybsigii siyaasadeed, kaddib markii uu diiday in uu magacaabo Raysalwasare soo dhisa xukuumad xilliga kala guurka hoggaamisa. Hadalkiisana wuxuu ahaa aniga ayaa labadiiba isku ah."
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Farmaajo uusan dooneyn wax kale oo aheyn "waxaan muddo kororsi ahayn".
"Ma jirto meelo badan uu ku sii dhuunto, maalmihiisuna way tirsan yihiin" Ayuu jiri Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.